Eziokwu, na Ezi Omume | Martech Zone
Ọ dị ka akụkọ Colbert kpatara ọgba aghara Wikipedia na ngalaba ọhụrụ a na Wikiality.
Ihe Mgbochi Wikipedia
Mmebi na Wikipedia
Wikipedia na-egbochi mgbanwe Elephats
A na-enwekarị ihe ngosi nke mkparị Colbert nke m na-enwe ekele maka ya. N'okwu a, Wikiality bụ ngbanwe nke ike ederede. Otu di na nwunye ruturu… “Ike zuru oke na-emerụ kpamkpam” yana “Ọ bụ ndị meriri ya dere akụkọ ihe mere eme”. Ana m arịọ mgbaghara maka iwepụtaghị oge iji kwado okwu ndị a.
Isi okwu m bụ na Wikiality na-enye ndị mmadụ ohere ịkwa emo na ịgbagọ eziokwu dịka ụfọdụ ihe atụ ndị ọzọ anyị nụrụ n'ọnụ gọọmentị anyị na ụlọ ọrụ mgbasa ozi:
CBS mere ya na akwụkwọ ụgha
Bush mere Ngwongwo nke Mbibi
The Bible (Gụọ Misquoting Jesus), okpukpe ndị Juu, Islam…
Sayensị, Al Gore na Okpomoku di n’uwa
Nkewa nke Churchka na Ọchịchị
Ndepụta ahụ toro oke….
Anaghị m ekwu na ihe atụ ọ bụla dị n'elu bụ eziokwu ma ọ bụ akụkọ ifo… mana esemokwu ahụ na-egosi anyị na enwere ike ịchịkwa ndị mmadụ n'ụzọ dị mfe. O buru na m nwere asambodo ntaakụkọ, aghaghi m ikwu eziokwu. Ọ bụrụ na m dee akwụkwọ, m ga-abụrịrị ọkachamara. Ọ bụrụ na ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị m kwuo ya, ọ bụ eziokwu.
“Eziokwu” na “Izi ezi” bu ihe efu nke onye na-ekwu ha dika nke a. Colbert na “Wikiality” etinyego ya n’uche. Banyere backlash nke "blogosphere", ị gaghị anụ mkpu ọ bụla si n'aka anyị! Anyị na-enwe ọ becauseụ n'ihi na anyị na-ekwu okwu banyere nke a ruo oge ụfọdụ. N’adịghị ka akwụkwọ, akwụkwọ akụkọ, akụkọ akụkọ, ma ọ bụ gọọmentị, ịntanetị na-enye ndị mmadụ ohere ịrụ ụka banyere eziokwu na izi ezi!
Ọ bụ ya mere Wikiality ji dị mma!